[18+] Wall Lover 壁ごしの恋人 (2008) - Myanmar Subtitle Movies - မန်မာစာတန်းထိုးဇာတ်ကားများ - Myanmar Tube
MD SDUnknown resource
DS SDUnknown resource
EL SDUnknown resource
[18+] Wall Lover 壁ごしの恋人 (2008) – Myanmar Subtitle Movies – မန်မာစာတန်းထိုးဇာတ်ကားများ
Mar. 05, 200872 Min.
Watching Wall Lover 壁ごしの恋人 Myanmar Subtitle Movies (မွနျမာစာတနျးထိုး) On Myanmar Tube
Maiko isahousewife who does not satisfied with the sex life with her old husband, Shusaku. One day Maiko’s student Kaito and his wife, Ayano, move to her neighbor. While Maiko teaches her new neighbor Kaito cooking, they both discover their mates unsatisfactory. Kaito’s wife Ayana wants to know some wise old man through mating website. She found Mr Dolittle and set up to meet him. When she saw her neighbor Shusaku at the meeting site, she left. She contacted Mr Dolittle that night and set up to meet him again.
ဇာတ်ကားတစ်ကားကို ပရိတ်သတ်လက်ထဲထည့်တော့မယ်ဆိုရင်…ဘာသာပြန်တဲ့သူလည်း အပင်ပန်းခံ တင်တဲ့သူလည်းအပင်ပန်းခံပြီးတော့ ဒေါင်းတဲ့သူတွေလည်းအကျိုးရှိအောင် ရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ဆက်ရပါတယ်….ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ အားလုံးနဲ့လုံးဝအဆင်ပြေစေမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်…18+ အများစုကတော့ လိုရာရောက်အောင်ဆွဲယူတက်ကြပေမဲ့ ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ထူးခြားပါတယ်..
ပညာပေးမက်ဆေ့လေးတွေပေးပါတယ်…အိမ်ထောင်ရှင်တွေရော လူပျိုတွေပါကြည့်သင့်တယ်..ဇာတ်လမ်းလေးကိုအတိုချုပ်ပြောပြပေးပါ့မယ်…အသက်ကြီးကျောင်းဆရာတစ်ယောက်က တက်သွေးကြွအပျိုဖြန်းလေးကိုယူမိတာက စတာပါပဲ…သူမရဲ့ရုပ်ရည်ကညွှန်းစရာမလိုအောင်ပြည့်စုံလွန်းလှပါတယ်…ဒါပေမဲ့ သူမမှာလိုအပ်ချက်ရှိနေပါတယ် အဲဒါကတော့ အသက်ကြီးတဲ့ယောကျာင်္းကိုယူခဲ့မိတာပါပဲ…သူမရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့တမျှလက်ဆက်နေတဲ့ ရာဂမီးကို ကျောင်းဆရာအိုကြီးက ညှိမ်းမပေးနိုင်တာပါပဲ…လူ့စိတ်ဆိုတာ အခက်သားကလား…လင်မယားဖြစ်နေပေမဲ့ ခံစားချက်တွေကိုမထုတ်ဖော်ကြဘူးလေ… ကြိတ်ပြီးခံစားနေကြတယ်လေ…ကောင်မလေးက မနေနိုင်တော့ အွန်လိုင်းကနေပစ္စည်းတွေမှာပြီး အာသာဖြေတော့တာပါပဲ…အဲဒီအတောအတွင်းမှာပဲ အိမ်နီးချင်လင်မယားသစ် တစ်တွဲ ထပ်ရောက်လာပါတယ်…သူတို့လင်မယားကလည်းအပေးအယူမတည့်ကြလို့ ကတောက်ကဆတွေနဲ့ပါပဲ…ဘာတွေဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မှာလဲဆိုတာတော့ စဉ်းစားမနေပဲ အပြေးသာဒေါင်းကြည့်ပေတော့ဗျာ…တစ်ကယ်တန်မှာပါဗျာ…စကားမစပ် အကြည့်နဲ့တင်အရည်ပျော်သွားနိုင်တဲ့ AV မင်းသမီးကြီးတွေသရုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်လို့ မိသားစုနဲ့ကြည့်ဖို့မသင့်တော်ပါဘူး…
Original title : 壁ごしの恋人
Running Time : 1hr 21min
Genre : Drama,Adult
Subtitle : Myanmar Subtitle
Original title 壁ごしの恋人
Download SD 480p မြန်မာ 539.74 MB 13
Download SD 480p မြန်မာ 539.74MB 10
Download SD 480p မြန်မာ 566.0 MB 10
[18+] From Straight A’s to XXX (2017) – Myanmar Subtitle Movies – မန်မာစာတန်းထိုးဇာတ်ကားများ
Avengers: Endgame 2019 – Myanmar Subtitle Movies – မြန်မာစာတန်းထိုး
[18+] My Friend’s Older Sister 친구 누나 (2016) – Myanmar Subtitle Movies – မန်မာစာတန်းထိုးဇာတ်ကားများ
[18+] The Handmaiden 아가씨 (2016) – Myanmar Subtitle Movies – မန်မာစာတန်းထိုးဇာတ်ကားများ
[18+] Mae Bia แม่เบี้ย (2015) – Myanmar Subtitle Movies – မန်မာစာတန်းထိုးဇာတ်ကားများ
[18+] Don Jon (2013) – Myanmar Subtitle Movies – မြန်မာစာတန်းထိုး
[18+] Young Mother 젊은 엄마 (2013) – Myanmar Subtitle Movies – မန်မာစာတန်းထိုးဇာတ်ကားများ
[18+] Mother’s Friend 엄마친구 (2015) – Myanmar Subtitle Movies – မန်မာစာတန်းထိုးဇာတ်ကားများ
[21+] Intimacy (2001) – Myanmar Subtitle Movies – မန်မာစာတန်းထိုးဇာတ်ကားများ
[18+] WhataGood Secretary Wants 착한 여비서의 목적 (2016) – Myanmar Subtitle Movies – မန်မာစာတန်းထိုးဇာတ်ကားများ